Fikarohana momba ny firaisana Raharaha Reincarnation zazakely israeliana iray izay mahatadidy fa novonoina tamin'ny Ax ary mamantatra ny mpamono ny fiainany taloha, izay miaiky - fikarohana reincarnation
Mpanadihady: Eli Lasch, MD
From: Ankizy izay efa niaina taloha, nataon'i Trutz Hardo
Zazalahy iray Druse dia teraka niaraka tamin'ny mari-piainan'ny fiainana taloha
Eli Lasch, MD dia dokotera fanta-daza tao Isiraely izay niasa ho mpanolotsaina zokiolona amin'ny fandrindrana ny serivisy ara-pahasalamana ao amin'ny Gaza Strip. Lasch, izay maty tany 2009, dia nanao fanadihadiana momba ny reincarnation izay nisy zazalahy iray mahatsiaro ny androm-piainany iray izay nahavono azy noho ny fikapohana azy teo amin'ny lohany tamin'ny famaky. Ilay zazalahy izay tsy voalaza ny anarany dia teraka tao amin'ny lohany mena lava. Ny ray aman-drenin'ilay tovolahy dia an'ny Mampiompa fivavahana, izay manasongadina ny reincarnation ho toy ny kofehy fototra. Any Isiraely, ny Druse no mipetraka indrindra ao amin'ny Faritra Golan Heights faritra, akaikin'i Syria, izay toerana nahaterahan'ity zazalahy ity.
Ny Zazalahy Druse dia mahatsiaro novonoin'ny tsofoka Ax ho an'ny loha
Fony vao 3 izy dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniny fa maty tamin'ny andro taloha izy, tamin'ny fikapohana azy teo amin'ny lohany tamin'ny famaky. Avy amin'ny zavatra nilazan'ny zazalahy ny ray aman-dreny sy ny havana hafa, dia noheverina fa nipetraka tao amin'ny akaiky teo ilay zaza tamin'ny fahitana azy taloha.
Ny rainy, havany sy loholona maromaro tao an-tanàna no nanapa-kevitra ny hitsidika ireo mpifanila tanàna akaiky raha hahalala raha afaka mamorona ny fiainany taloha. Nasaina ho tonga tamin'ity vondrona ity ny Dr. Lasch, satria fantatra fa liana amin'ny reincarnation izy.
Rehefa tonga tao amin'ny vohitra akaiky azy akaiky indrindra ilay vondrona dia nanontany ny zazalahy ny vondrona raha ekeny fa izany no toerana nisy ny tranony taloha. Nilaza taminy ilay zazalahy fa tsy tanàna niainany taloha izany, ka nandeha nankany amin'ny tanàna faharoa iray ilay tarika ary nitantara ilay zazalahy fa tsy ity ilay toerana niainany taloha.
Ilay zazalahy Druse dia mahita ny fiainany taloha, fasana sy mpamono olona
Rehefa tonga tao amin'ny tanàna fahatelo ilay vondrona dia nilaza ilay toerany fa teo izy no nipetraka. Nahatonga ny fahatsiarovana azy ny toerana niainany teo aloha, ary afaka nanome anarana olona maromaro izy tamin'ny fiainany taloha.
Amin'io fotoana io dia nahatsiaro ny anarany voalohany sy farany ity zazalahy ity tamin'ity fananganana ity taloha, ary koa ny anarana voalohany sy farany namono azy. Ny mpikambana iray tao anatin'io vondron'olona io, izay naheno ny tantaran'ny zazalahy dia nilaza fa nahafantatra ilay lehilahy fa ny zazalahy dia nilaza fa efa tao anatin'ny androm-piainany izy io. Ity lehilahy ity dia nanjavona 4 taona talohan'izay ary tsy hita intsony. Noheverina fa mety ho tonga tamin'ny loza sasany ity olona ity satria fantatra fa nisy olona maty na nogadraina tany amin'ireo faritra sisintany teo anelanelan'i Israely sy Syria noho izy ireo ahiahiana ho mpitsikilo.
Nandalo tao an-tanàna ilay vondrona ary tamin'ny fotoana iray dia nanondro an'io trano fiainana taloha io ilay zazalahy. Nisy mpifaninana somary nitangorona nanodidina ary tonga tampoka tamy lehilahy iray ilay zazalahy ary niantso azy anarany. Niaiky ilay lehilahy fa nomena anarana azy ilay zazalahy ary niteny ilay zazalahy avy eo:
“Mpifanila vodirindrina aminao aho taloha. Niady izahay ary novonoinao tamin'ny famaky aho. ”
Tsikaritr'i Dr. Lasch avy eo fa ny endrik'ity lehilahy ity dia tonga fotsy tampoka toy ny lamba. Ilay zaza 3 taona noho ny voalaza:
“Fantatro aza ny toerana nandevenany ny fatako.
Avy eo dia notarihin'ny zazalahy ilay vondrona, izay nahitana ilay mpamono olona voampanga, tany an-tsaha izay teo akaiky teo. Nijanona teo anoloan'ireo antontam-bato ny zazalahy ary nitantara hoe:
"Naleviny tao ambanin'ireto vato sy famaky etsy ambony ireto ny vatako."
Ny fialam-boly teo amin'ilay toerana teo ambanin'ireo vato dia nanambara ny taolan-dehilahy lehilahy lehibe niakanjo ny akanjon'ny mpamboly sy teo am-boalohany, nisy fisamahana tsipika iray teo amin'ny karandoha iray, izay nifanaraka tamin'ny ratra famaky.
Ax Murderer dia nanaiky ny fitaovam-piadiana tamin'ny famonoana olona taloha
Nilaza ny Dr. Lasch fa tamin'io fotoana io dia nijerijery tsara ny mpamono olona voampanga ny olona rehetra tao amin'ny vondrona, izay niaiky teo alohan'ny rehetra fa nanao io asa ratsy io. Avy eo, nandeha tany amin'ny toerana izay nilazan'ny zazalahy ilay vono olona namono olona ary ilay nihady dia nahita ilay famaky.
Nanontany ny tarika Druse ny Dr. Lasch hoe hanao ahoana ny amin'ilay mpamono. Notandremana izy ireo fa tsy hitodika any amin'ny polisy izy ireo; fa kosa hanasazy sahaza azy ireo izy ireo. Ny zavatra niseho tamin'ny mpamono dia tsy voalaza.
Ao amin'ny 1998, ny Dr. Lasch dia nitantara an'ity tranga ity tamin'ny Trutz Hardo, izay manao fanavaozana ny fiainana taloha tany Alemana. Andriamatoa Hardo avy eo dia nampiditra ny tantara tao amin'ny bokiny, Ankizy izay efa niaina taloha, navoaka tao amin'ny 2005.
Raha ampitahaina amin'ny tranga reincarnation izay nohadihadihan'ny Ian Stevenson, MD sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny University of Virginia, izay nanoratana tamim-pitandremana ny fijoroana ho vavolombelon'ny vavolombelona marobe, tsy misy antsipiriany io tranga io. Ny anaran'ny lohahevitra, mpamono olona ary vavolombelona dia tsy omena, izay mahatonga ny raharaha anecdotal. Ankoatr'izay, ny mpikaroka voalohany amin'ity tranga ity, ny Dr. Eli Lasch, dia maty tao 2009. Na izany aza, tranga manintona izy io, izay manaraka ny ohatry ny tranga nodinihin'i Dr. Stevenson.
Fehim-piainana taloha na mari-pamantarana: Ny lohahevitra Druse tamin'ity tranga ity dia teraka niaraka tamin'ny tsipika fitondra-tsipika teo amin'ny lohany, izay hita fa mifanaraka amin'ny làra amin'ny zotra ao anaty karandoha hita amin'ny rafitry ny fiainany taloha, izay hita namboarina tamin'ny tsipoapoaka.
Fahatsiarovana jeografika: Raha nentina tany amin'ny tanàna niainany taloha ny Druse momba ity raharaha ity, ny zava-niainana ara-jeografika dia nanentana ny fahatsiarovana ny fiainany taloha, anisan'izany ny anarany taloha, ny anaran'ilay mpamono olona taloha sy ny toerana nisy ny vatany taloha sy ny fitaovam-piadiana namono olona.